Home News Faahfaahin:-Qarax ka dhacay dalka kenya
Faahfaahin:-Qarax ka dhacay dalka kenya
Ugu yaraan saddex Qof ayaa ku dhaawacantay kaddib markii uu qarax ka dhacay degaanka Lamu ee Dalka Kenya.
Taliyaha Howlgalka xoreynta keynta Booni, Joseph Kanyiri, ayaa sheegay in qaraxa oo ay dhigeen AL-shabaab sida uu hadalka u dhigay uu dhaawac culus ka soo gaaray saddex qof.
Gaariga uu qaraxa qabsaday ayaa lagu sheegay in uu ahaa Gaari Xamuul ah oo ka soo baxay degaanka Sankuri.
Waxaa uu sheegay in dadka Qaraxaas ku dhaawacmay la geeyay Isbitaalka Kiunga,waxaana uu intaas ku daray in kaddib loo wareejinayo Isbitaalka Boqor Fahad oo ku yaalla Lamu.
Dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa kala ahaa labada Darawal ee Gaariga weyn iyo kaaliyahoodii,waxaana ay Badeeco ka qaadeen degaanka Kiunga iyada oo u waday Magaalada Hindi.
Agaasimaha howlgalka xoreynta Kenyta Booni ayaa sheegay in ay qaraxa kaddib baaritaan ka sameeyeen degaanka uu qaraxa ka dhacay iyo dhulka ku xeeran ayna ku daba jiraan kuwa qaraxa ka dambeeyay.
Previous articleMarkad India leedahay oo hub ku qabtay xeebaha Soomaaliya
Next articleLa taliyaha amniga Farmaajo muxuu ku maagay idaacadda VOA
Yoweri Museveni :-’’Farmaajo 4-jeer ayuu Been Noo sheegay ma Aamini...
Dad Muqdisho laga Af-duubtay oo la baadi-goobaayo (Aqriso)